Sida Aynu Gacanta Ugu Guurno Rakibaadaha WordPress | Martech Zone
Sida Aynu Gacanta Ugu Guurno Rakibaadaha WordPress
Jimcaha, Agoosto 8, 2014 Jimcaha, Agoosto 8, 2014 Douglas Karr
Waxaad jeclaan laheyd inaad ka fikirto ka guuritaanka bartaada WordPress mid martigaliye ah mid kale runti waa fududahay, laakiin runtii way ku xumaan kartaa. Waxaan macno ahaan u caawinaynay macmiil xalay go'aansaday inuu ka guuro hal marti-geliye una wareego mid kale waxayna si dhakhso leh isugu bedeshay fadhi cillad bixin ah. Waxay sameeyeen wixii ay dadku caadi ahaan sameyn lahaayeen - waxay sifeeyeen rakibaadda oo dhan, way dhoofiyeen keydka, waxay u wareejiyeen server-ka cusub waxayna keensadeen keydka xogta. Ka dibna way dhacday page bog madhan.
Dhibaatada jirta ayaa ah in dhamaan martida loo yahay aan si siman loo abuurin. Kuwo badan ayaa leh noocyo kala duwan oo Apache ah oo leh qaybo kala duwan oo socda. Qaarkood runtii waxay leeyihiin arrimo ogolaansho funky ah oo sababa dhibaatooyin la xiriira soo rarida feylasha, iyaga oo ka dhigaya kuwo wax aqrin kara oo keliya, isla markaana sababa arrimaha gelinta sawirada. Qaar kale waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo ah PHP iyo MySQL - dhibaato aad u xun oo ku jirta warshadaha martigelinta. Keydadka qaarkood waxaa ka mid ah feylal qarsoon oo dhibaato u geysta ciidan kale maxaa yeelay qafis u gaar ah iyo dib u wareejin loogu talagalay server-yada.
Dabcan, tan xitaa kuma jirto xaddidaadda faylka. Taasi caadi ahaan waa arrinta ugu horreysa haddii aad leedahay rakibaadda weyn ee WordPress file faylka keydka keydku waa mid aad u ballaaran oo aad soo dejiso oo ku soo dejiso adoo adeegsanaya maamulka MySQL.
Waxaa jira qaar ka mid ah qalab weyn oo halkaas ka jira si ay u caawiyaan, sida CMS ilaa CMS. Waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa shirkadda Automattic VaultPress adeegga - kaliya kaydso goobta, ku rakib WordPress cusub martida cusub, dib u rakib VaultPress, oo dib u soo celi goobta. Dadkani waxay qabteen shaqo wanaagsan markay ka shaqeeyaan arrimo badan oo aad la kulmi doontid markaad isku daydo inaad u guurto degel internet ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaan u egnahay inaan keligeen ku tagno waxyaabahan oo, si xanuun leh, badiyaa annaga ayaynu ku kacnaa. Waxaan jecelahay qodobka rakibaadda cusub markaan u guurayo marti-geliye cusub halkii aan ka jiidi lahaa wax dhibaato ah oo nala socda. Marka waa kuwan tallaabooyinka aan adeegsanno:
We hayaan rakibaadda oo dhan iyo goobta oo ku soo dejiso maxalliga ah si loo xafido.
We dhoofinta keydka macluumaadka (oo aan had iyo jeer lagu darin kaydinta) oo ku soo dejiso maxalliga ah si aad u ilaaliso.
We ku rakib WordPress cusub on serverka cusub oo kor u qaad oo socda.
We kudar plugins midba mar si loo hubiyo inay dhammaantood is waafaqsan yihiin oo shaqeynayaan. Qaar ka mid ah horumariyeyaasha plugin waxay qabteen shaqo fiican oo ay ku jiraan dejintooda aaladda dhoofinta ama bixinta dejintooda u gaarka ah dhoofinta iyo soo dejinta.
We dhoofinta waxyaabaha ka socota bogga jira adoo adeegsanaya aaladda dhoofinta WordPress oo lagu dhisay isla WordPress.
We soo dejiso waxyaabahaas bogga cusub adoo adeegsanaya aaladda Soo Dejinta WordPress ee lagu dhisay isla WordPress. Tani waxay kaa dooneysaa inaad ku darto isticmaaleyaasha… xoogaa shaqo ah laakiin u qalma dadaal.
We FTP faylasha wp-content / uploads halkaas oo dhammaan hantideena faylka la duubay ay ku jiraan server-ka cusub, hubinta rukhsadda faylka si habboon loo dejiyo.
Waxaan dejinay ah dejinta permalinks.
We sifee mawduuca oo rakib adoo adeegsanaya qalabka rakibidda mawduuca WordPress.
Waxaan dulucda u dhigeynaa live iyo dib u dhis liiska.
We dib u dhig wijidka nuqulna ka dheji / dhaji waxyaabaha ku jira wixii lagama maarmaan ah laga bilaabo duug ilaa server cusub
We gurguurto goobta si loo raadiyo wixii arrimo ah ee faylasha maqan.
We gacanta dib u eeg dhammaan bogagga ee goobta si loo hubiyo in wax walba ay u muuqdaan kuwo wanaagsan.
Haddii wax walba u muuqdaan kuwo wanaagsan, waan sameyn doonnaa cusbooneysii goobahayaga DNS si loo tilmaamo martida cusub oo toos loo noolaado.
Waxaan hubin doonaa in Jooji goobinta Goobidda ee Qalabka Akhrisku waa naafo yahay.
Waxaan ku darnaa wax kasta CDN ama qafis farsamooyinka loo oggol yahay martida cusub inay goobta ka helaan xawaare. Mararka qaarkood tani waa sheygan, waqtiyada kale waa qeyb ka mid ah qalabka martida loo yahay.
Waan yeeli doonnaa dib ugu soo celi goobta Qalabka Webmasters ' si loo arko haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo ay Google arkayso.
Waxaan xafideynaa kooxdii martida loo ahaa ilaa todobaad ama wax la mid ah… hadiiba ay jirto arin masiibo ah. Toddobaad ama wax kabadan markaan sifiican usocono kadib, waxaan joojin doonaa martidii hore oo aan xireynaa koontada.
Tags: ereyga 'backuppress'cms ilaa cmssida loo haajiro wordpresshaajiraan WordPressdhaqaaq boggadhaqaaq wordpressdib u qor wordpresssoo celi ereyada wordpressxakamayntakeydka wordpresswordpress soo celizip wordpress
Sideed Wax U Qabataa Marka La Barbardhigo 400 Suuqleyaal Kale?
Dunida Kormeerka iyo Falanqaynta Warbaahinta Bulshada